Wednesday June 09, 2021 - 01:55:29 in Wararka by Super Admin
Hargeysa (Xogreebnews)- Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland waxaan si milgo leh ugu bogaadinayaa go'aanka geesinimada leh ee uu qaatay taasoo uu ku calool adaygay kagana dhabeeyey hirgelinta doorashooyinkii isku-sidkanaa ee dalka ka qabsoomay 31/05/2021. Waxay ahayd dhacdo taariikhi ah oo qurux iyo karaamo badan u soo kordhisay guud ahaanba Qaranka JSL, wanaageeda iyo sumcadeedana waxa ku suntan Madaxweyne Muse Biixi.
Haddaba, shaki kuma jiro in codbixiyeyaasha Gobollada Togdheer iyo M/jeex ay hadleen oo ay farriin cad u direen Xisbiga Kulmiye. Farriintani waa mid siyaasi ah oo leh miisaankeeda iyo saamaynteeda xagga loolanka siyaasadda, xilliga dhaw iyo xilliga dheerba. Farriinta ka timid labadii qalcadood ee ugu waaweynaa ee uu Xisbiga Kulmiye awal ku awood badnaa waa mid aan la dhayalsan karin nuxurka ay xambaarsan tahay. Farriinta ka timid Burco iyo Hargeysa waxay leedahay: "Is bedele xaaladaha siyaasada ee Togdheer iyo M/jeex, waxna ma ahaanayeen sidoodii hore! Taageeradayada iyo codkayagana looma qaadan karo mid aan weligii is bedelayn ama meel u sii yaala cid gaar ah!!"
Su'aalaha waaweyn ee ka soo baxday natiijooyinkii goleyaasha Togdheer iyo Maroodi-jeex waxa ka mid ah:
Kolba sida uu Xisbul-Xaakimku uga jawaabo su'aalahan, qaabka uu u waajaho xaqiiqada dhabta ah ee hortiisa taalla, iyo kolba sida uu Xisbigu diyaar ugu yahay in uu gudihiisa ku sameeyo isbedel u cuntama codbixiyaha ayay ku xidhan tahay dib-u-soo kabashada Kulmiye iyo inuu dib u hanto kalsoonida taageerayaashiisii awooda badnaa ee saldhiga iyo sababtaba u ahaa guulihii kala dambeeyey ee Xisbiga Kulmiye u suurto geliyey in uu hanto hoggaaminta talada dalka.